एक्रिलिक पानाहरू, एक्रिलिक मिरर पाना, प्लास्टिक मिरर पाना - डोhuaहुआ
DHUA २००० मा स्थापना भएको थियो उच्च गुणवत्ता एक्रिलिक शीट, एक्रिलिक दर्पण शीट र विभिन्न प्लास्टिक दर्पण शीटहरू प्रदान गर्न।
लगातार उच्च-गुणवत्ता उत्पादनहरू बनाउनुहोस्
PETG - दर्पण
एन्टी-फोग कोटिंगलाई कक्षा १० सफा कोठामा धुवा उच्च गुणको पाली कार्बोनेट मिररमा लागू गरियो। एन्टी-फोग मिरर सबैभन्दा कठिन अवस्थामा फगिंगको सामना गर्न ईन्जिनियर गरिएको छ। सामान्य रूपमा दाह्री / नुहाउने दर्पण, दन्त मिरर, र सौना, स्वास्थ्य क्लब अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग हुन्छ। उत्पाद नाम एंटी-फोग मिरर, फोगलेस मिरर, फोग फ्री मिरर मटेरियल पॉली कार्बोनेट (पीसी) कलर क्लियर शीट साइज 15 15१ * १3030० मिमी, कस्टम कट-टु-साइज मोटाई १.० - .0.० मिमी मास्किंग पालीफिल्म MOQ she० शीट ...
उत्तल सुरक्षा र सुरक्षा मिरर, सडक यातायात उत्तल दर्पण एक उत्तल दर्पण एक गोलाकार परावर्तन सतह हो (वा कुनै गोलाकार को एक भाग मा फैशनेको कुनै सतह) जसमा यसको ठुलो भाग प्रकाशको स्रोत सामना गर्दछ। सुरक्षा वा दक्ष अवलोकन र सर्भेल्यान्स अनुप्रयोगहरूको लागि विभिन्न स्थानहरूमा दृश्यता बढाउन मद्दतको लागि दृश्यको क्षेत्र विस्तार गर्न यसले एक कम आकारमा विस्तृत कोण छवि प्रतिबिम्बित गर्दछ। DHUA उत्तम गुणवत्ता उत्तल दर्पण आपूर्ति गर्दछ जो सुपरि प्रदान गर्दछ ...
हल्का वजन, प्रभाव, चकना-प्रतिरोधी, कम महँगो र गिलास भन्दा बढी टिकाऊ भएकोबाट फाइदा उठाउँदै, हाम्रो एक्रिलिक दर्पण पाना धेरै अनुप्रयोगहरू र उद्योगहरूको लागि परम्परागत गिलास दर्पणको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै ऐक्रेलिकहरू जस्तै, हाम्रा ऐक्रेलिक ऐना शीटहरू सजिलैसँग काट्न सकिन्छ, ड्रिल गर्न सकिन्छ, गठित बनावट र लेजर एच्ड। हाम्रो दर्पण पानाहरू विभिन्न रंग, मोटाई र आकारहरूमा आउँदछन्, र हामी कट-टु-साइज मिरर विकल्पहरू प्रदान गर्दछौं। उत्पाद नाम खाली ऐक्रेलिक plexiglass दर्पण ...
स्पष्ट Plexiglass एक्रिलिक पाना, पारदर्शी प्लास्टिक शीट एक्रिलिक, Plexiglass को रूप मा पनि चिनिन्छ, थर्माप्लास्टिक हो र अक्सर शीटमा लाईटवेट वा छद्म प्रतिरोधी विकल्पको रूपमा आपूर्ति गरिन्छ। स्पष्ट ऐक्रेलिक पानाहरूले ग्लास जस्ता गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ - स्पष्टता, चमक र पारदर्शिता - तर आधा तौलमा र ग्लासको धेरै पटक प्रभाव प्रतिरोध। यो बनावट गर्न सजिलो छ, Adhesives र solvents संग राम्रो सम्बन्ध छ, र ऑप्टिकल स्पष्टता को घाटा बिना थर्मोफर्म गर्न सजिलो छ। डोhuaहुआ मुख्य रूपमा ...
रंग एक्रिलिक मिरर पाना, रंग मिरर एक्रिलिक Plexiglass पाना लाइटवेट, प्रभाव, बिस्तार प्रतिरोधी, गिलास भन्दा कम महँगो र अधिक टिकाऊ हुनुबाट लाभ, हाम्रो एक्रिलिक दर्पण शीट धेरै अनुप्रयोग र उद्योगहरूको लागि परम्परागत गिलास दर्पण को विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै ऐक्रेलिकहरू जस्तै, हाम्रा ऐक्रेलिक ऐना शीटहरू सजिलैसँग काट्न सकिन्छ, ड्रिल गर्न सकिन्छ, गठित बनावट र लेजर एच्ड। हाम्रो दर्पण पानाहरू विभिन्न रंग, मोटाई र आकारहरूमा आउँदछन्, र हामी कट -... प्रस्ताव गर्दछौं।
उच्च चमक पीईटीजी मिरर शीट, पीईटीजी प्लास्टिक मिरर शीट पीईटीजी मिरर शीटिंग एउटा अत्यन्त बहुमुखी प्लास्टिक शीटिंग हो जुन सामान्यतया ईन्जिनियरि,, प्रसाधन सामग्री, भण्डारण कन्टेनर, र अधिकमा प्रयोग गरिन्छ किनकि सजिलैसँग विस्तृत जानकारीको साथ जटिल आकारहरू सिर्जना गर्न यसलाई थर्मोफॉर्मेड र कटौती गरिन्छ। पीईटीजी मिररले उत्कृष्ट स्पष्टता, सतह चमक चमक, कुनै किसिमको श्वेत पार्ने, मसी र पेन्ट स्वीकार्दैन, र खाद्य सम्पर्कको लागि एफडीए-अनुमोदितबाट विस्तृत लाभ प्रदान गर्दछ। PETG मिरर पाना बहुमुखी बनावट प्रदान गर्दछ ...
पोलीकार्बोनेट मिरर, पीसी मिरर, मिरर गरिएको पोलीकार्बोनेट शीट जस्तो लोकप्रिय छ, पॉली कार्बोनेट मिरर सबैभन्दा प्रभाव-प्रतिरोधक सब्सट्रेट हो। हाम्रो पॉली कार्बोनेट (पीसी) मिरर एक राम्रो विकल्प हो यदि तपाईंलाई उच्च गर्मी प्रतिरोध र प्रभाव शक्तिसँग मिरर गरिएको सतह चाहिन्छ भने। हाम्रो पॉली कार्बोनेट दर्पणका केही फाइदाहरू हुन् उच्च प्रभाव शक्ति, स्थायित्व, उच्च ताप प्रतिरोध, क्रिस्टल स्पष्टता र आयामी स्थिरता। हामीसँग ०.२5 ~ mm मिमी मोटाई, 15 १15 * १3030० मिमी आकार, स्पष्ट चाँदीको रंग availabl छ ...
मिरर वाल स्टिकर, हटाउन योग्य एक्रिलिक मिरर स्टिकर DIY वाल सजावट मिरर नन ग्लास मिरर होम बैठक कोठा बेडरूम सजावट को लागी तपाइँको घर वा कार्यालय को लागी एक सुन्दर सजावटी दर्पण डिजाइन तपाईंको कोठा एक ताजा लुक दिनेछ, एक आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्नेछ र तपाइँलाई एक आश्चर्यजनक स्पर्श दिनुहुन्छ। भित्री ध्वा ऐना भित्ता स्टीकर डेकल प्लास्टिक एक्रिलिकले बनेको छ, सतह परावर्तनशील छ र पछाडि गोंद आफैं छ; त्यहाँ मिर्रो रोक्न आईनेको सतहमा एक सुरक्षात्मक फिल्म छ ...
कृपया हामीलाई सन्देश दिनुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा रहनेछौं।
Thermoplastics अभिव्यक्ति र नवीनता को लागी एक उत्कृष्ट माध्यम हो। हाम्रो उच्च-गुणवत्ता, बहुमुखी ऐक्रेलिक पाना र प्लास्टिक ऐना उत्पादनहरूको चयनले डिजाइनरहरूलाई उनीहरूको सृजनात्मक दर्शनहरू जीवनमा मद्दत गर्दछ। हामी अनगिनत कला र डिजाइन अनुप्रयोगहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न र colors्गहरू, मोटाईहरू, ढाँचाहरू, पाना आकार र बहुलक फार्मुलेशन प्रदान गर्दछौं। हामी एक्रिलिक डिजाइनहरू र रिटेलरहरू र व्यवसायको लागि ओको एक विशाल एर्रे संग घर सजावटको लागि निर्माणको एक ठूलो चयन प्रदान गर्दछौं।
उत्पाद विवरण ऐक्रेलिकहरू मिथाइल मेटाक्रिलेट (पीएमएमए) को पोलीमर हुन्, असंख्य सम्पत्तिहरू ट्रेड ट्रेडहरूमा वा पोइन्ट-अफ-खरीद डिस्प्लेहरूमा प्रदर्शनको लागि उपयोगी। तिनीहरू स्पष्ट, हल्का वजन, कडा र प्रभाव प्रतिरोधी, अनुकूलन योग्य, कपडा गर्न सजिलो र सफा गर्न सजिलो छन्। एक्रिलिक्सको साथ सम्भावनाहरू ट्रेड शो प्रदर्शनभन्दा पर जान्छन्। ऐक्रेलिकहरू अन्य फुटकर तत्त्वहरू जस्तै म्यानक्विन्स, विन्डो डिस्प्ले, भित्तामा चढिएको रैक वा सल्फहरू, काउन्टरटप डिस्प्ले र साइनेज घुमाउँदै लोकप्रिय विकल्प हो।
उत्पाद विवरण एक्रिलिक राम्रो कारण संग हालका वर्षहरु मा फ्रेम को लागी गिलास भन्दा लोकप्रियता मा प्राप्त गरेको छ। ● यो शटरप्रूफ र हल्का वजनको छ, कांचको विपरित हो। यो विशेषताले फोटोग्राफरहरूको लागि एक्रिलिक नै राम्रो बनाउँदछ जुन बच्चाहरू र परिवारहरूसँग काम गर्दछ - विशेष गरी बच्चाहरू। नर्सरी वा प्लेरूममा एक्रिलिक प्यानलको साथ फ्रेम ह्याing्ग गर्नु गिलास वैकल्पिक भन्दा बढी सुरक्षित छ किनकि यसले कसैलाई चोट पुर्‍याउने सम्भावना कम हुन्छ। ● थप रूपमा, शटरप्रूफ र लाइटवेग ...
उत्पादन विवरण प्रकाश अनुप्रयोगहरूका लागि प्राय: प्रयोग हुने सामग्रीहरू ऐक्रेलिक र पाली कार्बोनेट हुन्। एक्रिलिक प्लेसिग्लास र पोलीकार्बोनेट पानाहरू दुबै बलियो र टिकाऊ प्लास्टिक शीटहरू हुन् जुन शीर्ष-अफ-द-रेखा दृश्य सम्भावनाहरूको साथ छ। DHUA मुख्य रूपमा तपाइँको प्रकाश अनुप्रयोग को लागी एक्रिलिक पानाहरु प्रदान गर्दछ। हाम्रो अप्टिकल ग्रेड ऐक्रेलिक लाईट गाइड प्यानल (LGP) बनाउन प्रयोग गरियो। LGP एक पारदर्शी ऐक्रेलिक प्यानल हो जुन १००% भर्जिन PMMA बाट बनेको हुन्छ। प्रकाश स्रोत यसको किनारा (हरू) मा स्थापित छ। यसले l बनाउँछ ...
एक्रिलिक पीओपी डिस्प्ले बनाउनका लागि प्रयोग हुने सबैभन्दा सामान्य सामग्रीहरू मध्ये एक हो, विशेष गरी उद्योगहरू जस्तै सौंदर्य प्रसाधन, फेशन, र उच्च टेकमा। स्पष्ट ऐक्रेलिक को जादू को ग्राहक को उत्पादन को व्यापार को पूर्ण दृश्यता प्रदान गर्न को क्षमता मा निहित छ। यो काम गर्न सजिलो सामग्री हो किनकि यसलाई मोल्ड गर्न, काट्न, रंगीन बनाउन, गोंद गर्न र गोंद गर्न सकिन्छ। र यसको सहज सतहको कारण, एक्रिलिक प्रत्यक्ष मुद्रणको साथ प्रयोग गर्नको लागि एक उत्कृष्ट सामग्री हो। र तपाइँ y को लागी तपाइँका प्रदर्शनहरू राख्न सक्षम हुनुहुनेछ ...
DHUA बाट साइनेज सामग्रीले बिलबोर्ड, स्कोरबोर्डहरू, रिटेल स्टोर साइनेज र ट्रान्जिट स्टेशन विज्ञापन प्रदर्शन कभर गर्दछ। सामान्य उत्पादनहरु मध्येलेक्ट्रेटिक स ,्केत, डिजिटल बिलबोर्ड, भिडियो स्क्रिन र नियन संकेतहरू समावेश छन्। धुवाले प्राय: ऐक्रेलिक सामग्रीहरू प्रदान गर्दछ जुन मानकमा उपलब्ध हुन्छ, र कट-टु-साइज शिटहरू र साइजेज अनुप्रयोगको लागि अनुकूलन बनावट। एक्रिलिक स्केत एक चमकदार फिनिशको साथ एक प्लास्टिकको पाना हो। यो फ्रोस्टेड र स्पष्ट सहित धेरै फरक रंगहरूमा आउँदछ। यो संकेत प्रकार l हो ...
DHUA ले उत्तल सुरक्षा र सुरक्षा मिरर, ब्लाइन्ड स्पट मिरर र निरीक्षण दर्पण क्वालिटी ऐक्रेलिक मिरर पानाबाट बनेको बनाउँछ जुन हल्का तौल, छिन्न प्रतिरोधात्मक र उत्कृष्ट स्पष्टता हो। DHUA उत्तल ऐना दर्शनीय रूपमा रिटेल, गोदाम, अस्पताल, सार्वजनिक क्षेत्रहरू, लोडिंग डक, गोदामहरू, गार्ड बुथहरू, उत्पादन सुविधा, पार्कि g ग्यारेज र ड्राइभवे र चौराहाहरूबाट सडकको लागि प्रयोग गरिन्छ। सुरक्षा र सुरक्षाको लागि उत्तल दर्पण प्रयोगका फाइदाहरू तल सूचीबद्ध गरिएको छ: हल्का वजन, ...
कुन प्रकारको प्लास्टिक मिररले ठूला क्षेत्रहरूको मामलामा विकृतिबिना ग्लास मिररहरू बदल्न सक्छ?
कुन प्रकारको प्लास्टिक मिररले ठूला क्षेत्रहरूको मामलामा विकृतिबिना ग्लास मिररहरू बदल्न सक्छ? सर्वप्रथम हामीले यी सामग्रीहरूका आधारभूत विशेषताहरू बुझ्नु आवश्यक छ: १. एक्रिलिक मिरर (एक्रिलिक, Plexiglass, PMMA, Polymethyl Methacrylate) लाभ: उच्च पारदर्शिता, दर्पण कोटिंग ...
Plexiglass को लागी बजार फलफूल छ
Plexiglass को बजार Booming छ Plexiglass एकाएक तातो चीज हो, सामाजिक दूरी र सुरक्षा को आवश्यकता बढेको छ। त्यो एक्रिलिक plexiglass आपूर्तिकर्ता को लागी व्यापार मा एक ठूलो uptick मतलब हो। मार्चको मध्यमा कलहरूको भीड सुरु भयो। कोरोनाभाइरस महामारी को रूप मा छिटो स्वीप्स ...
एक्रिलिक मिरर शीट कसरी स्थापना गर्ने एक्रेलिक मिरर पाना पर्खाल, ढोका, प्रवेश मार्ग र अधिकमा एक व्यावहारिक र सुन्दर थपको लागि बनाउँदछ, जुन तपाईं यसलाई स्थापना गर्नुहुन्छ जुन स्थानमा एक आधुनिक टच थप्न। एक्रिलिक मिरर पाना एकदम लोकप्रिय छ किनकि यसले क्लासिक उपस्थिति प्रदान गर्दछ। गिलास जबकि हुनु ...